Tag: tahan'ny fiovam-po | Martech Zone
Tag: tahan'ny fiovam-po
Ampitomboy ny fiovam-ponao amin'ny ady amin'ny famonoana ireo mpamono olona 5
Talata, Aogositra 21, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Raha misy orinasa iray an-tserasera afaka manara-maso sy mandrefy ny tahan'ny fiovam-po isaky ny miovaova, dia ireo olona ao Formstack! Mpinamana sy mpankafy ary mpiara-miasa amin'ny ekipa efa an-taonany maro izahay, ary tsy mampaninona azy ireo izany eto Indianapolis izany! Ity angona vaovao sy infografika farany avy ao amin'ny Formstack ity dia manondro olana 5 izay mety mandratra mafy ny taham-panovana anao: Fisoratana anarana amin'ny media sosialy - manatanteraka fomba tsara kokoa noho ny fisoratana anarana banga. Raha ny marina, 87%
Ahoana ny fandrefesana ny ROI amin'ny fampielezana horonan-tsary
Alatsinainy, Jolay 23, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Ny famokarana horonan-tsary dia iray amin'ireo paikady ara-barotra izay matetika ambany isa raha ny amin'ny ROI. Ny horonantsary maharesy lahatra dia afaka manome ny fahefana sy fahatsoram-po izay manavaka ny marikao ary manosika ny vinavinanao handray fanapahan-kevitra momba ny fividianana. Ireto misy antontan'isa tsy mampino mifandraika amin'ny horonan-tsary: ​​Ny horonan-tsary tafiditra ao amin'ny tranonkalanao dia mety miteraka fiakarana 80% amin'ny tahan'ny fiovam-po Ireo mailaka misy horonan-tsary dia manana taham-pivoarana 96% avo kokoa raha ampitahaina amin'ny mailaka tsy misy horonan-tsary